အခမဲ့ TomTom မြေပုံများ - သင်၏ TomTom အားမွမ်းမံရန်သင်မည်သို့သိသနည်း။ | Gadget သတင်း
အခမဲ့ TomTom မြေပုံများ
ပါပလော Aparicio | | GPS စနစ်
အလိုရှိ သင်၏ TomTom ကို update လုပ်ပါ? ဒီနေ့မှာငါတို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ နောက်ကွယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည့်ထိုpaperရာမစက္ကူမြေပုံများရှိသော်လည်း၎င်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့်လက်အိတ်အိတ်ထဲပြန်ထည့်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ အခုငါတို့မှာငါတို့မြေပုံတွေအများကြီးရှိပြီ။ ငါတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲ၊ စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ desktop GPS navigator များတွင်အင်တင်နာကြီးများရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများထက် ပို၍ တိကျမှန်ကန်ပြီးနာမည်အကျော်ကြားဆုံး Navigator များသည် TomTom ၏အစဉ်အလာအတိုင်းဖြစ်သည်။
အ TomTom မြေပုံများ ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းအချက်အလက်အများကြီးဆက်ကပ် ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ လမ်းများအပြောင်းအလဲမြန်လာသည်နှင့်အမျှအချက်အလက်များသည်ခေတ်နောက်ကျသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့်onရိယာပေါ် မူတည်၍ ခြောက်လမျှသာကျွန်ုပ်တို့မရှိတော့သောနေရာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းညွှန်သော GPS တစ်ခုရရှိနိုင်သည်။ ကောင်းသောအရာသည် အခမဲ့ TomTom ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ ဒီအချက်အလက်ဟာမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် မကောင်းတာကပစ္စည်းကိုမွမ်းမံဖို့အတွက်ငွေအများကြီးပေးရမယ်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကုန်ကျစရိတ်ကိုမခံနိုင်ပါကမြေပုံများကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်အမြဲတမ်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
1 TomTom မြေပုံများကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
2 TomTom Maps ကို Install လုပ်ပါ
3 fantactivate ဖြင့် TomTom မြေပုံများကိုသက်ဝင်စေပါ
4 TomTom မှာ Radars ထည့်သွင်းနည်း
4.1 955/956 မြေပုံသဟဇာတဇယား
4.2 960 မြေပုံသဟဇာတစားပွဲပေါ်မှာ
TomTom မြေပုံများကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop TomTom ကိုအမြဲတမ်းအဆင့်မြှင့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဖိုရမ်ကို Forokeys.com တွင်ကြည့်ပါ။ Forokeys တွင်ကျွန်ုပ်တို့ TomTom မှမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစွမ်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၌လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရရှိနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်မတူပါ၊ TomTom အစားသူသည်“ အရူး” ဖြစ်သည်။ သို့သော် Forokeys တွင် TomTom အတွက်မြေပုံများသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ရေကြောင်းသွားလာမှုဖြစ်စေမည့်အခြားမက်လုံးများလည်းရှိသည် လမ်းကိရိယာ.
ငါရည်ညွှန်းနေတဲ့မက်လုံးကိုဖြစ်ကြသည် အကျိုးစီးပွားအချက်များပိုမိုကောင်းမွန်သော POI (အကျိုးစီးပွား Point) သို့မဟုတ် POI ဟုလူသိများသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာအချက်များထဲမှကျွန်ုပ်တို့လည်းရှိသည် ပုံသေရေဒါဥပဒေအရပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရမည့်ရေဒါအချို့ရှိသော်လည်းဒေသတွင်းဖြတ်သန်းသွားသောအခါတိုင်း DGT (Traffic အထွေထွေညွှန်ကြားမှု) ၏အချက်အလက်များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းထက်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ GPS ရေကြောင်းလမ်းတွင်ထည့်သွင်းခြင်းသည်အမြဲကောင်းသည်။ ငါတို့မသိဘူး
TomTom မြေပုံများကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောမြေပုံများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုရမ်၌ရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စပိန်မြေပုံများကိုလိုချင်လျှင် "Iberia" သို့မဟုတ် "Europe" ကိုရှာဖွေရန်သင်စိတ်ဝင်စားမှုသည်။ မြေပုံကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းအတွက်လည်းသင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရမည် activator သောဖိုရမ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ForoKeys တွင်မြေပုံတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းသည်ဤအမျိုးအစား (တရားမဝင်သော) ဖိုင်အမျိုးအစားများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဖိုရမ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စာမူကိုတွေ့လိမ့်မည် TomTom မြေပုံများသို့လင့်များ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည်ကဤ link များသည်ကျော်ကြားသောဖိုင်များ (ဥပမာ Mega ကဲ့သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်) ဒိုမိန်းတစ်ခုထဲရှိမြေပုံ download site သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းကို VIP ဖိုရမ်အသုံးပြုသူများအတွက်သာရရှိနိုင်သည်။ ဒေါင်းလုပ်ချပြီးတာနဲ့သူတို့ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
TomTom Maps ကို Install လုပ်ပါ
Tomtom GPS တွင်မြေပုံတစ်ခုထည့်ပါ Desktop လုံးဝရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိပါ (ရှုပ်ထွေးမှုနောက်မှလာသည်) ။ ထည့်သွင်းရန်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါမည်။
USB ကြိုးကို GPS နှင့်ကွန်ပျူတာသို့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်သည် (ဖြစ်နိုင်လျှင် Windows) ။
"My PC" မှာ TomTom ကိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ drive တစ်ခုအဖြစ်မြင်ရလိမ့်မယ်။ ငါတို့ဖွင့်လိုက်တယ်
ဖိုင်တွဲကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားသော file နှင့်တူတူအမည်ပေးသည်။ ၎င်းသည်တူညီသောနာမည်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် "east_europe.zip" ကိုကူးယူပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်တွဲကို "Eastern_europe" (ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ) ဟုခေါ်သင့်သည်။
fantactivate ဖြင့် TomTom မြေပုံများကိုသက်ဝင်စေပါ
တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီဟာအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပဲလို့ငါထင်တယ်။ ForoKeys မှ "fantactivate" ကိုကူးယူနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုလို မြေပုံများကိုသက်ဝင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ TomTom GPS ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Windows PC နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Tomtom ၏ဖြုတ်တပ်နိုင်သော drive ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင်သုံးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် FastActivate.exe ဖိုင်ကို GPS ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်ကူးယူပါ။ ငါတို့မှာကဒ်ရှိရင် SD ကဒ်မှာပိုကောင်းတယ်။
ကျနော်တို့ FastActivate.exe ကို run
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောမီနူးအရေအတွက်ကိုနှိပ်ပါ။ နံပါတ် ၄ ကိုနှိပ်ပါ။
TomTom မှာ Radars ထည့်သွင်းနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ TomTom desktop ပေါ်တွင် POIs (Points of Interest) ကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။ TomTom မြေပုံများကိုမည်သို့တပ်ဆင်သည်ကိုသိခြင်း၊ ရေဒါတပ်ဆင်ပါ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးပြီးဓာတ်ပုံကိုမရိုက်ဖို့ကကလေးကစားနည်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသောဖိုင်များကို radars_fijos.ov2 (နှင့်ကျန်မတူညီသော extension များပါသောအမည်များ) ကိုလိုချင်သောမြေပုံဖိုင်တွဲသို့ဆွဲယူရုံသာလိုအပ်သည်။
ယုတ္တိနည်းအရဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များသို့မဟုတ်စပိန်နိုင်ငံမှရေဒါများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါက၎င်းကို“ Iberia” ဖိုလ်ဒါသို့မဟုတ်ဥရောပကဲ့သို့သောစပိန်ပါသည့်မြေပုံထဲသို့ကူးယူရန်လိုသည်။ စပိန်၏ရေဒါများသည်အာရှမြေပုံပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရေဒါတပ်ဆင်ထားသည့်နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတိပေးချက်များကိုလက်ခံခြင်းကိုရပ်တန့်သွားပါမည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဥရောပမြေပုံများတွင်စပိန်ရေဒါများကိုတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည် စိတ် ၀ င်စားစရာအချက်များကိုသူတို့ဖန်တီးခဲ့သည့်မြေပုံပေါ်တွင်သာအသုံးပြုပါ။ ကုသခြင်းထက်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။
သင့်မှာ TomTom desktop navigator ရှိရင်၊ သင်၌အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါ ဒါကြောင့်သူကအမြဲတမ်းသင့်ကိုဘယ်လိုပြောသင့်တယ်၊ ငါတို့လမ်းပေါ်ရောက်နေရင်အမြဲတမ်းအရေးကြီးပြီးအရေးကြီးတာပေါ့။ ရဲတွေသင့်ကိုအပြစ်မပေးဖို့၊ သင်အမြဲတမ်းအသုံး ၀ င်သော၊ ယခုထက် ပို၍ ပို၍ အရေးကြီးသောအကျပ်အတည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်သင်အသုံးပြုသောမြေပုံများတွင်ရေဒါများကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။ ဘယ်သူမှလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးသုံးရတာကောင်းတယ်။
တစ်ခုခုကိုလမ်း, "သတိထား, ယာဉ်မောင်းသူငယ်ချင်း, လမ်းအန္တရာယ်ရှိသည်။ " ဘယ်လိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလား သင်၏ TomTom ကိုအခမဲ့မွမ်းမံပါ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » GPS စနစ် » အခမဲ့ TomTom မြေပုံများ
163 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Osvaldo Juan Maccio ဟုသူကပြောသည်
ဘယ် GPS တွင်အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံနှင့်၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ၏မြေပုံပါ ၀ င်သည်ကိုသိချင်ပါတယ်
Osvaldo Juan Maccio ကိုပြန်ပြောပါ
tomtom နှင့်အခြား browser များနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများအတွက် javiermb ၏ဖိုရမ်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည် - http://foro.javiermb.com
နှင့်မြေပုံများအခမဲ့မဟုတ်သူတို့ foreros ၏ compilations ဖြစ်ကြသည်။
dvd ၂၀၀၈ တွင် Navman မွမ်းမံခြင်းကိုသတိပြုပါ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများရှာဖွေခြင်းပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းသတင်းပို့ခြင်း မရှိ၍ မည်မျှပင်တိုင်ပင်ပါစေသူတို့သည်လက်ကိုဆေးကြောသန့်စင်ပြီး၎င်းတို့အားအများဆုံးပို့ပေးသည်မှာအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည် CRAMBO တွင်သင့်ကိုသူတို့ရောင်းသည်ဟုဖြစ်သည်။ ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်သင့်ကိုသူတို့ LONDON navman သို့ပို့သည်။
ငါ tomtom ကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုမြေပုံမရှိဘူး၊ မြေပုံကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်အောင်လုပ်တာလဲ
ကျွန်ုပ်၏ TOM TOM မိုဘိုင်း gps အတွက် venezuela မြေပုံကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီမှ tomtom one v2 အတွက်မြေပုံကိုဘယ်လိုရရမလဲပြောပြပါ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုဖျက်လိုက်ပြီးမိတ္တူကူးမထားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီမှ tomtom one v2 အတွက်မြေပုံဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါ။ အဲဒီနောက်ငါပယ်ဖျက်မိပါတယ်။ backup မိတ္တူမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
TOM TOM ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကဘာလဲ
ငါမက္ကဆီကို၏မြေပုံများကို GPS ရှာဖွေခြင်း 3v4 အတွက်မည်သို့ရှာဖွေနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းပြောပြနိုင်မည်နည်း။
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့် tomtom ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်ရမလဲဆိုတာပြောပြပါ။
အားလုံးဖော်ရွေမှုအတွက်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်မှာ Tom Tom 720 go ရှိတယ်။
မြေပုံ version v705 နဲ့အတူငါ v8 version ကိုထည့်ချင်တယ်။ သူမှာရေဒါရှာဖွေစက်နဲ့အခြားလှည့်ကွက်တွေပိုများနေတယ်၊ ​​ဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြပေးပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ tomtom one အတွက်ဗင်နီဇွဲလားမြေပုံဘယ်မှာရနိုင်လဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Ed3 tomtom ရှိပြီးဗင်နီဇွဲလားအတွက်ကျွန်တော့်ကိုကူညီပါမည်။ ... ??
oscar Santana ဟုသူကပြောသည်
ဟင်၊ ငါဗင်နီဇွဲလားမှာနေပြီး tomtom တစ်ခုအတွက်ဒီနိုင်ငံမြေပုံရဖို့လိုတယ်။ ဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
oscar santana ကိုပြန်လည်စာပြန်ပါ
မည်သူမဆို tomtom တ ဦး တည်း maps.thanks update လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏
Gustavo က de Lemos ဟုသူကပြောသည်
GPS Tom Tom One အတွက် venezuela မြေပုံများရှိမရှိကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။
gustavo de lemos သို့ပြန်သွားပါ
အပေါ်က link ကိုချိတ်ဆက်ထားသောစာမျက်နှာတွင် tomtom5နှင့်6အတွက်ရွေးချယ်စရာများသာတွေ့တယ်။
Tomomé ONE ဟုသူကပြောသည်
သူတို့သည်မေးမြန်းပြီးသော်လည်းမည်သူမျှဖြေကြားခြင်းမတွေ့ရပါ။ TomTom ONE အတွက်စပိန် - အန်ဒိုရာ - ပေါ်တူဂီ၏မြေပုံများကိုမည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်၊ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
TOMTOM ONE မှစာပြန်ပါ
Luis Alfredo ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ် tomtom 125 ကိုဝယ်ပြီးဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံကိုကျွန်ုပ်မရှာနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်လျှင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်ရရှိသောနေရာကိုကျေးဇူးတင်ပါ။
Luis alfredo အားပြန်ပြောပါ
ဟဲလိုငါ Tom tom one kiero ကို update လုပ်တယ်ဒါ vien ace ၇ နှစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို kiero စပိန်ပေါ်တူဂီနဲ့အန်ဒရာဘယ်လောက်နည်းနည်းစိတ်ကူးမရှိဘူး။
လူတိုင်းကိုဘယ်သူမေးသလဲ၊ ဘယ်သူမှဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာလူတိုင်းမေးကြတာကိုငါတွေ့ပြီလား။ ငါရေကန်အကြောင်းသိလျှင်ဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ GPS သည် Tom Tom ဖြစ်သည်။ 3rd edition gps သည်အလွန်ကောင်းသော်လည်း gringos အတွက်မူ၎င်းမှာကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးမှာ။ helpaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tomtom 74500 မှစပိန်မြေပုံကိုရှာနေပါတယ်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဘယ်မှာရှာရမလဲမသိဘူး
ကျွန်ုပ်၏ tomtom URGENT အတွက် venezuela မြေပုံများကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း
ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။ tomtom go 300 navigator အတွက်စပိန်မြေပုံကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 24/02/2009
ernesto ရောင်းအား ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလားတွင်နေထိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ GPS tomtom မှ ကျေးဇူးတင်၍ မြေပုံကိုမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်ကိုမသိပါ
ရောင်းအား ernesto မှပြန်ကြားပါ
Eleazar Jaime ဟုသူကပြောသည်
ငါယူအက်စ်အေတွင်နေထိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါမက္ကဆီကိုကိုသွားပြီး gom tom 730 အတွက် GPS မြေပုံကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရင်သူတို့ကိုငါသိစေချင်တယ်
eleazar jaime အားပြန်ပြောပါ
tomtom 720 မြေပုံပေါ်တွင်အဆင့်မြင့် LANE လမ်းညွှန်
TOMTOM ONE အတွက်၎င်းကို emule သို့မဟုတ် lphant မှ download လုပ်ပါကမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်
စပိန်မြေပုံကိုကူးယူရန်၊ စပိန် / cline.dat ဖိုင်အတွက်စကားဝှက်တစ်ခုတောင်းခံသည်။ စကားဝှက်ကားအဘယ်နည်း။
ပတ္တမြား nachar ဟုသူကပြောသည်
BlackBerry အတွက် GPS စနစ်
ruben nachar အားပြန်ပြောပါ
မည်သူမဆို Iiberia ပေါင်းများအတွက်ကုဒ်များသိလား
ဒီကုဒ်ကိုကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသို့ပို့နိူင်သူတစ် ဦး ဦး သိလျှင် 664111639
ကောင်းပြီ။ ကျွန်ုပ်မှာ Tom TOM ONE XL တစ်ခုရှိပြီးဒီပစ္စည်းကိရိယာအတွက်ဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းသိချင်တယ်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။!!!!
ကျွန်ုပ်သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ gps (tomtom) အတွက်ဥရောပမြေပုံကိုဒေါင်းလုပ်မချနိုင်သေးပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါသလား။
ငါ xom မော်ဒယ် usa အတွက်2Tom toms ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ငါအာဂျင်တီးနားမှာသုံးချင်တယ်၊ မင်းတို့မင်းတို့ c ဒါမှမဟုတ်ရှုံးရင်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟယ်လို !!! omtom one 2nd edition အတွက်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်မြေပုံကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ။
မားကို့စ Catillo ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ဗင်နီဇွဲလားမြေပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့ chorrera ကိုအဖြေမပေးနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်အချိန်နဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းတီးပစ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။
marcos catillo သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ htc စိန်ရွှေအတွက်စပိန်၏အခမဲ့မြေပုံများကိုမည်သူကရနိုင်မည်ကိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အနောက်ဥရောပ Tomtom ONE အတွက်မြေပုံများကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲ
ဟယ်လို Flores၊ မင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီလား။ မပါလျှင်, ပတ်သတ်ပြီးငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
TOMTOM ONE XL အတွက်မြေပုံများ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သနည်း။
Tomtom ဗင်နီဇွဲလားမြေပုံများ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောညညကျွန်ုပ် tomtom တစ်ခုအတွက်ဥရောပမြေပုံကိုကူးယူရန်လင့်အချို့ကိုသိလိုခဲ့သည်
မကြာခဏ asshole, pornos စာမျက်နှာများကိုရိုက်ထည့်ရန်အရာအားလုံး, ပြCASနာကိုမယူပါနဲ့အစစ်အမှန်မြေပုံမဟုတ်ပါ
မကြာခဏ asshole, pornos စာမျက်နှာများမှအရာအားလုံး, သူတို့အစစ်အမှန်မြေပုံများမဟုတ်ပါ, သူတို့မှားယွင်းသော link များမှာဖြစ်ရပ်မှန်ကိုငြင်းဆန်မထားဘူး
Jilipollas, pornos စာမျက်နှာများကို ၀ င်ရန်အရာအားလုံးသူတို့အမှန်တကယ်မြေပုံများမဟုတ်ပါ၊ သူတို့မှားယွင်းသောအရာများဖြစ်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောမတူပါစေနှင့်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ TomTom One XL ရှိတယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ Map Share အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးပါပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်ကဒီအစီအစဉ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ချင်ပါတယ်
Javier shrew ဟုသူကပြောသည်
tomtom အတွက်ဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံများကိုတောင်းသောသူတို့အားငါပြောမည်။ သူတို့မှာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ သူငယ်ချင်းချားဗေ့စ်အားမေးမြန်းပြီးကိစ္စကိုဖြေရှင်းလိုက်သည်။
Javier Shrew အားပြန်ကြားပါ
David benitez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် TOM TOM ONE GPS ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးမက္ကဆီကို၏မြေပုံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရောင်းရမည်ကိုသိလိုပါသည်။
David Benitez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ စပိန်နိုင်ငံရှိယာဉ်ထိန်းရဲများ၏ရေဒါများ၏အခြေအနေနှင့်ပိုလျှံမြန်ခြင်းမရှိသော tomtom gps အတွက်အဆင့်မြှင့်ထားသောမြေပုံကိုဘယ်မှာရှာရမလဲသိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Gustavo အေ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် TOMTOM One gps အတွက် venezuela မြေပုံကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ ???
SONY NV-U93T အတွက်ဥရောပ၏အသစ်ပြင်ဆင်ထားသောမြေပုံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ရှာရမည်နည်း။
အမှန်တရားကတော့ gps tom tom သည် bullshit ဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနားမြေပုံကိုဒီ poronga သို့မတင်ပို့နိုင်ပါ။ ထိပ်ဆုံးတွင်ဖိုရမ်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတိုင်း shit သွားကြပြီးငါ့ကို GPS များယူဆောင်လာသူလည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ် tomtom one xl ကိုအွန်လိုင်းတွင်အခမဲ့အလကားရနိုင်သည်။
တောင်အမေရိကတွင်ဘရာဇီးနှင့်အာဂျင်တီးနားတို့အတွက် tomtom မြေပုံများသာရှိသည်
Jose Luis ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် qtek s200 မိုဘိုင်းရှိပြီးကျွန်ုပ်မှာ tomtom ရှိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အခမဲ့ရယူနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါကကျွန်ုပ်အားစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်
MY TOMTOM ON SE (၁၂၅ SE) အတွက်အခမဲ့မက္ကဆီကိုမြေပုံများကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ကြောင်းမည်သူမဆိုသိသည်။
ကြည့်ကြရအောင် ... အခြားသူများ၏တူညီသော ... ဗင်နီဇွဲလားမှ TOMTOM အတွက်ပုံ။ ။ ငါမှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါပါဒယ်လ်ပါဒက်စ်တွေအားလုံးမှာဒီနေရာမှာပါ။ ဂြိုလ်ပေါ်ရှိစုစည်းထားသောမေးခွန်းများ ... မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများမရှိပါ။
မင်္ဂလာပါဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံကိုကျွန်ုပ်၏ gps tomtom သို့ချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရန်စောင့်ဆိုင်းပါ။
အကြင်သူသည်အလိုရှိသည်၌ကျွန်ုပ်သည်သွားဘက်၌အလုပ်လုပ်သော tomtom မိတ္တူတစ်စုံနှင့်ကျွန်ုပ်ထံဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သူမည်သူမဆိုရှိသည်။ gasper210688@hotmail.com
မင်္ဂလာပါ။ TomTom ၏မည်သည့်ဗားရှင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ BlackBerry Curve 8520 စမတ်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေချင်သည်၊ ၎င်းမရှိလျှင် Garmi, Sgic သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းမဆို…။
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သို့ GPS TOMTOM XL 30 စီးရီးကို ၀ ယ်လိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ရင် screen ပေါ်မှာမြေပုံမရှိဘူး၊ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖုန်းဆက်ပြီးမြေပုံအသစ်ဝယ်ရမယ်လို့ပြောတယ် iberia v8.40 ငါးပိကျိုးနပ်သည်၊ ၎င်းကိုအခမဲ့ရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသေးသည်။
SONY 93T အတွက်ဥရောပမြေပုံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်သနည်း။ TOM TOM ၏မြေပုံများကိုထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းရှိပါသလား။ SOM 93T တွင် TOM TOM ကိုတပ်ဆင်ပြီးသားသူရှိပါသလား။
leider medina ဟုသူကပြောသည်
ငါ့သူငယ်ချင်း၊ ငါပနားမားမြေပုံကိုငါ့ GPS gom tom-tom သို့မည်သို့ install ရမည်ကိုသိလိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
leider medina အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်လက 730 tomtom go ကိုဝယ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ရေဒါတစ်ဝက်ခန့်ကိုပင်မပြောနိုင်ပါ။ သင်အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်သောအခါမြေပုံများနှင့်ရေဒါများအဆင့်မြှင့်တင်သင့်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုဒေါင်းလုတ် (သို့) မွမ်းမံလို့ရမလဲအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
tomtom one v8 အတွက်စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီတို့၏မြေပုံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောပြနိူင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Iberia မှာထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အမှားတွေကကျွန်တော့်ကိုမှားယွင်းစေတယ်။ ကိရိယာကမမှန်ဘူး၊ ငါ့ကိစ္စအတွက်ငါ format လုပ်ရတော့မယ်။ gps ကြောင့်အမှားတစ်ခုကလွဲလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းသောမနက်ဖြန် Tom tom တစ်ခုအတွက် venezuela မြေပုံလိုအပ်ပါတယ်
ငါ tomtom gps အတွက် venezuela ၏မြေပုံကိုရှာဖွေရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများနှင့်တူသည်။
Garmin မြေပုံများကို Tomtom gps အသုံးပြုသော format သို့ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့် software ရှိပါသည်။ gpsbabel ဟုခေါ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မအောင်မြင်ပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကအောင်မြင်လျှင်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေပါ ..
TomTom မြေပုံအတွက်အခမဲ့အီတလီနှင့်စပိန်မြေပုံကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ် download လုပ်နိုင်သည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောပြနိုင်ပါမည်။
စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီ၏မြေပုံရေးဆွဲခြင်းကိုတစ်ပြားတစ်ပြားမှမလိုဘဲရေဒါများဖြင့်မည်သို့ download ဆွဲရမည်နည်း။
ကောင်းပြီ gps သည်တစ်တန်တန်ချိန် v4 ဖြစ်သည်
ဟိုဆေး Granados Parejo ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Pda Airis ရှိတယ်၊ Tom Tom ကိုဘယ်လိုတင်ရမယ်ဆိုတာငါသိချင်တယ်
Jose Granados Parejo အားပြန်ပြောပါ
ဒါပေမဲ့ AND Juan ဟုသူကပြောသည်
အာဗေလနဲ့လီဒီတို့ကသင့်ကိုချစ်ပါတယ်။ အချစ်မတိုင်မီကနှင့် AYAI အများများစားစား
BUT AND ယောဟန်အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ။ Otamendi, Miramar ကဲ့သို့သောမြို့များ၏မြေပုံကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲ။
Louis macher ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ TomTom GPS အတွက်မြေပုံမြေပုံကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်၍ ဝယ်ယူနိုင်သည်ကိုသိလိုပါသည်။
Luis Macher ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ tomtom v4 series 30/125/130 ရှိတယ်။ ဘယ်သူမှမြေပုံမွမ်းမံပြီးပြီလား၊ မည်သည့်နေရာမှ download လုပ်နိုင်သည်ကိုငါသိချင်တယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့အီးမေးလ်ပါ။ javier.pm74@hotmail.com.
ပါဘလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာအာဂျင်တီးနားမြေပုံပြproblemနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ ၂ GPS အဖြစ်ရပ်တန့်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာပြည်သူတွေပါ http://www.mapeo-gps.com.ar salu2
ကျွန်ုပ်တွင် tomtom တစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ tomtom ရှိစပိန်မြေပုံအသစ်များကိုမည်ကဲ့သို့ရှာဖွေရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါက k သည်ကျွန်ုပ်၏ msn ke လက်ဝဲသို့ရောက်ရှိသွားပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
လက်ထပ် Noelia blanco ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ tomtom start ရှိပြီး italy ၏လမ်းပြမြေပုံရချင်ပါတယ်။ ငါဘယ်မှာရနိုင်မလဲမည်သူမဆိုသိကြပါသလား ?? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
noelia blanco နှင့်ဆွေးနွေးပါ
Guaynabo Puerto Rico မှ Rafael Melendez ဟုသူကပြောသည်
ငါ MAGALLAN ဂျီပီအက်စ်ဝယ်ပြီးအဲဒါကိုမွမ်းမံဖို့လိုတယ်၊
ငါလစာရပြီးအခမဲ့ဟူသောစကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ကားအဘယ်နည်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုအရာကိုကျွန်ုပ်အားရှင်းပြနိုင်သည်ကျွန်ုပ်သည်နားလည်မှုမရှိပါ။
Guaynabo Puerto Rico မှ Rafael Melendez အားပြန်ပြောပါ
Victor Mendez ဟုသူကပြောသည်
ငါ tomtom go 730 ရှိတယ်။ မက္ကဆီကိုမြေပုံကိုမင်းငါ့ကိုပေးမလားကြည့်ချင်တယ်
VICTOR MENDEZ ကိုစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသော NavCore 9.001 သည် GO 720 တွင် install လုပ်နိုင်သည် ...
တရားဝင် TomTom စာမျက်နှာပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်သဟဇာတ 8.351 အဖြစ်စာရင်းပြုစုထားသည်
ကျွန်ုပ်တွင် XROAD GPS ရှိသည်။ MEXICO ၏မြေပုံကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောပြနိုင်မည်။ ကျွန်ုပ်အားအလွန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းအားကစားသမားအပြေးသမားအတွက် GPS လိုအပ်သည်။
angel azamar ramirez အားပြန်ပြောပါ
Edwin egure ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Tom Tom တစ်ခုအားမက္ကစီကိုရှိမြို့တစ်ခုမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမြို့တစ်မြို့သို့မည်သို့ပရိုဂရမ်သွင်းနိုင်မည်နည်းကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံမြေပုံများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Edwin Egure အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Tom tom 510 ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံခြင်းကိုတစ်ခါမှမပြုလုပ်ဖူးပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။ နောက်ဆုံးသတင်းရှိပါသလား လိုက်နာရမယ့်အဆင့်တွေကိုငါ့ကိုပြောပြလို့ရမလား။
720 သွားရန် Tomtom အတွက်မက္ကဆီကို၏အခမဲ့မြေပုံကိုမည်ကဲ့သို့ကူးယူရမည်ကိုမည်သူမဆိုသိရှိပါသလား။ ငါ့အီးမေးလ်က jalvareal@hotmail.com ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
GPS X လမ်းအတွက်မက္ကဆီကိုမြေပုံနဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်မလား
ကျွန်ုပ်၏ Tom Tom XL 335 SE တွင်ထည့်ရန်ဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
ဟဲလိုငါအီဘီးရီးယားထုတ်ဝေမှုအသစ် Tom tom တစ်ခုရှိပြီးငါ့မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပြတ်တောက်သွားလို့မြေပုံတွေအားလုံးကိုငါလိုအပ်တယ်။ မင်းရဲ့အကူအညီကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်
သူငယ်ချင်းများ၊ ဘယ်လိုနေလဲ ကျွန်ုပ်၌ tomtom one gps ရှိပြီးဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဤနေရာတွင် download လုပ်ရမည်ကိုရှာမတွေ့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မယ်။ ငါ tom 720 မှာမြေပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့အင်တာနက်ရှာဖွေနေတာရက်ပေါင်းများစွာရှိပြီ။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သိတဲ့သူရှိရင် ကျေးဇူးပြု၍ မရနိုင်တော့ဘူး၊ ငါတို့ကိုကူညီပါ,
Sony 93T အတွက်မြေပုံဘယ်မှာရှာရမလဲ။
ငါ့မှာ airis 509 PDA ရှိတယ်၊ TomTom6ရှိတယ်၊ Iberia ရဲ့မြေပုံအသစ်ကိုလိုချင်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Aviton GPS ရှိပြီးကျွန်ုပ်မက္ကစီကိုမြေပုံကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကြည့်ချင်ပါသည်
wilfredo Martinez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ကျွန်တော့် tomtom one xl အတွက်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏အများဆုံးအတည်ပြုထားသောမြေပုံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ် download လုပ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ
wilfredo martinez အားပြန်ပြောပါ
HELLO ENGO UN TOMTOM ONE XL EUROPE ။
ပြီးတော့ငါအဲဒါကိုမွမ်းမံချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီ gps အတွက်မြေပုံများကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအရမ်းဈေးကြီးတယ်၊
MARGARITA DE LA TORRE ဟုသူကပြောသည်
Guodalajara မှာ TOMTOM ဖြန့်ဖြူးသူရှိသလားဆိုတာကျွန်တော့်ကိုမေးပါ။ US မှာကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်။
MARGARITA DE LA TORRE အားစာပြန်ပါ
မာဂရီးက de la torre ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မှာ tomtom mod XXL 550-T နဲ့ပြproblemနာရှိနေတယ်။ usa ဆီကယူလာပြီးရုတ်တရက်မျက်နှာပြင်နီလာတယ်။ ဒဏ္legာရီကတော့ငါနဲ့မြေပုံပြaနာရှိနေတယ်၊ ​​အဲဒီမှာငါမထွက်နိုင်ဘူးလို့တစ်ယောက်ယောက်ကပြောနိုင်တယ် ငါ့ကိုဘာဖြစ်သွားတယ်၊ မင်းမှာအကြံဥာဏ်ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
margarita de la torre အားပြန်ကြားပါ
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တွင် Tomtom ကြိုးမဲ့ MkII gps ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Bluetoth မှ Palm Treo 650 နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံမြေပုံများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးမလားကြည့်ပါ
ဗင်နီဇွဲလားအတွက် TOMTOM GO 730 GPS ကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ယူပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလားအတွက်လမ်းကြောင်းများကျွန်ုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
FRANCISCO PEREZ အားပြန်ကြားပါ
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကျွန်ုပ်၌ tomtom တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုမည်သို့မွမ်းမံရမည်ကိုမသိပါ။ ပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
juan perez အားပြန်ပြောပါ
နှစ်နှစ်လောက်လုံး tomtom one xl europe ကို ၀ ယ်ခဲ့ပြီးအဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်မ update လုပ်သေးဘူး၊ ဒီ gps ရဲ့လက်ရှိမြေပုံများကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ငါမက်ဒရစ်မှာနေထိုင်ပြီးငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီ model ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ငါလိုအပ်တယ်။
ငါလည်းမင်းကိုမေးချင်တယ်၊ မြေပုံတွေကို update လုပ်တဲ့အခါ GPS ကငါ့ကို load လိမ့်မယ်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလွယ်ကူစေရုံသာမကဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကျွန်ုပ်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်တရားဝင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မူမပေါ်သေးပါ။
SANTOS SANCHEZ ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးပဲလိုပဲငါ ENSENADA BC MEXICO မှာနေပြီးငါငါ့ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုမက္ကဆီကိုရဲ့ R မြေပုံများကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ငါတတိယအကြိမ်မြောက်အောင်မြင်မှုရပြီးချိန်မှစ။ ငါဘယ်လိုရှာမလဲ
SANTOS SANCHEZ အားပြန်ပြောပါ
cesar anibal nieto G. အ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် tomtom xl ရှိပြီးကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်၏အီကွေဒေါနိုင်ငံ၏မြေပုံများကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ အားလုံးသည်၎င်းစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းမှအသိအမှတ်မပြုသောကြောင့် tomtom စနစ်ကိုပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြလိုသည်။ ဝဘ်ပေါ်တွင် update လုပ်ပါ။
cesar anibal nieto G. အားစာပြန်ခြင်း
ကျွန်ုပ်ကိုမော်ရိုကို (သို့) အာဖရိက၏မြေပုံများကိုရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် tomtom ကို 1505 t မှ usa တွင် ၀ ယ်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားမြေပုံများကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း ???
ja ကျေးဇူးတင်စကားမှ GPS tomtom 310 အတွက် argentina သို့တိကျသောမြေပုံ
အလွန်တော်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ TOMTOM ONE GPS အတွက်အီကွေဒေါမြေပုံများကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားကူညီပေးနိုင်လျှင်သိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာရှိသောမြေပုံရရန်အလွန်ခဲယဉ်းပါကဤ tomtom gps ကိုစျေးကွက်တွင်အဘယ်ကြောင့်ဖြန့်ချိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဘယ်သူကမှငါသူတို့ကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတာသိရင်အီကွေဒေါ rrrrrr ရဲ့မြေပုံလိုတယ်
ငါ tomtom go 730 ငါသင်တန်း၏မြေပုံများကို update လုပ်ချင် XNUMX ရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်သည် tomtom go 710 ကိုဥရောပမြေပုံနှင့်အတူယူနိုက်တက်စတိတ်မြေပုံကိုမည်သို့တင်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
andres alcala ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောညငါ venezuela ၏မြေပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကဲ့သို့သောလွန်ခဲ့သောတူသော gps tom340 xl ရှိသည်ငါဒီကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အတူအကူအညီလိုအပ်
andres alcala သို့ပြန်သွားပါ
TomTom XXL ကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဗင်နီဇွဲလားရဲ့မြေပုံတွေကိုရှာမတွေ့နိုင်ဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်ရင်အနည်းဆုံးငါသဘောကျတဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကောင်းတယ် တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ကျွန်ုပ် Tomtom ONE ၌မြေပုံများပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားလက်ရှိမြေပုံနှင့်အတည်ပြုသူတစ် ဦး ရရှိရန်ကူညီနိုင်ပါသလား။ ရယ်စရာ
Sony 93T မှ Igo 8 သို့အရာရာတိုင်းကိုငါပြောင်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည် p ... အမေ၊ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးခေတ်မီသောမြေပုံများ၊ ရေဒါများနှင့် poi များမှဖြစ်သည်။
javier လိုပက်ဇ် iglesias ဟုသူကပြောသည်
တောင်အာဖရိကအတွက် tom tx xxl အတွက်အသစ်သောမြေပုံကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်ပါတယ်။ သင်ကူညီနိုင်မလား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
javier lopez iglesias သို့ပြန်သွားပါ
စိတ်ဝင်စားသူများတွင် gps-expert ရှိနိုင်ပါသည်။ org
Guillermo Acuña Garrido ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် ၇″ jpc လမ်းညွှန်မြေပုံကိုတစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင်အသစ်ပြောင်းရန်လိုသည်
Guillermo Acuña Garrido သို့ပြန်ပြောပါ
ငါလက်ရှိမြေပုံ spom tomtom tomtom တ ဦး တည်း3ထုတ်ဝေလိုအပ်ပါတယ်
ဟိုင်း၊ တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားကြည့်ပါ ဦး ။ ငါ့မှာ Pocket PC ရှိတယ်။ ရောင်းသူက Iberia နဲ့ Canary Islands မြေပုံတွေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်ကငါ့အတွက် Tomtom ကိုသွင်းခဲ့တယ်။ ယခုငါဘရာဇီးကိုသွားပြီးတိုင်းပြည်၏မြေပုံများကိုရေးချင်သည်။ သို့သော်အခမဲ့လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့။ ကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်ကရနိုင်မလဲပြောပြပါ
Ramiro ။ ငါကိုလံဘီယာတွင်ရောက်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Medellin မြေပုံသို့ဘာပြောင်းရန်လိုအပ်သနည်း။
rodolfo Leon diaz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ချီလီနှင့်ကျွန်ုပ်နိုင်ငံအတွက်မြေပုံလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Tom tom ONE (Series 30) / 125/130 - 1GB TTS * ချီလီအတွက်မြေပုံရှိမရှိပြောပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
rodolfo leon diaz အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ် TOMTOM ကို ၀ ယ်ပြီးသင့်၌ဗင်နီဇွဲလား၏မြေပုံရှိသလားသိလိုသည်။
Rogelio Quezada Sepúlveda ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် TOMTOM VIA 1500M SE ရှိသည်၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ရန်လိုသည်၊ ၎င်းသည်၎င်းတွင်ရှိပြီးသောနိုင်ငံများစွာတွင်မပါဝင်ပါ။ ငါသည်ဤကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ။ မဆိုကူညီမှုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
Rogelio Quezada Sepúlvedaအားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ gps dash mw 710 gtv ရှိတယ်။ အဲဒါကိုမွမ်းမံဖို့ဘယ် system ကိုသင်သိပါသလဲ။ သူတို့က Tom Tom ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပေမယ့်ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးမနေချင်ဘူး
Miguel အိန်ဂျယ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် tontom ရှိပြီးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နယ်သာလန်တို့၏စာပို့သင်္ကေတများကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်သိလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါ။
ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားငါငါရယ်နေတယ်။ သင်သည် GPS တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးသင်၏တိုင်းပြည်၏မြေပုံများရှိမရှိကိုသင်မသိပါ။
ဟားဟား။ စကားမစပ်၊ မင်းကိုရောင်းလိုက်သူကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အရမ်းရယ်ရတယ်
မီဂေးလ်၊ သင်သည်ပြည်ပရှိ GPS ကိုဝယ်ယူပြီး၎င်းသည်သင်၏ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်တိုင်းပြည်သို့ပြန်သွားပြီးသင့်အားကံကြမ္မာကိုအားမသွင်းဘဲအခြားမြေပုံများကိုထည့်သွင်း။ မရပါ။ ဒါကလူတွေရှာတွေ့တဲ့အရာပဲ။ မင်းကအရမ်းမိုက်တာ၊ မပျော်တာ၊
ငါမြေပုံကိုအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည် Medellin ကိုလံဘီယာမှပါ
ဝီလျံဗန်ဂတ်စ်က M ဟုသူကပြောသည်
WILMAR VANEGAS M ကိုစာပြန်ပါ
ငါ USA ၏မြေပုံများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်တိုင်းပြည်ရွေးချယ်စရာအတွက်မပေါ်ပါဘူး
renault rlink တွင်ပါသော tomtom မြေပုံများကို update လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားမည်သူကူညီနိူင်မည်နည်း။ မြေပုံဗားရှင်း 925275 ကိုတင်သည်။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ PC တွင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသော TOMTOM အယ်လ်ဘမ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြသမည်နည်း ????????????????????
အလိုအလျောက် XL GPS ကျေးဇူးတင်စကားကိုမွမ်းမံရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြရန်ဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလိုချင်သနည်း။
omar David ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ tomtom star25 ရှိပေမယ့် usa မြေပုံများပါရှိပါတယ် ဦး နှင့်အမေရိကန်၊ ကနေဒါမက္ကစီကိုမှဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါကအာဂျင်တီးနားတောင်ပိုင်းကလိုချင်တယ်
omar david အားပြန်ပြောပါ
Juan Miguel Cassissa ဟုသူကပြောသည်
ငါ XXL ပြည်ပမှာဝယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုတဲ့ TOMTOM XXL ရှိသည်။ ယခုငါအာဂျင်တီးနားတွင်နေထိုင်ရန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ Tom Tom Home သို့မဟုတ် MyDrive Connect မှအာဂျင်တီးနားနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကျွန်ုပ်မြေပုံများ ၀ ယ်သည်ကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်လမ်းရှာ။ မရပါ (ကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ၏မြေပုံများမှအပ) ၀ ယ်ယူခြင်းကုန်ဆုံးချိန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်အမှားတစ်ခုရှိခဲ့သည်ဟုပြတင်းပေါက်တစ်ခုကအမြဲတမ်းပေါ်လာသည်။ စသည်တို့ ကျွန်ုပ်သည်အာဂျင်တီးနားမှ TOM TOM အိမ်တွင်အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးသင့်အဒေါ်လည်းမရှိ၊
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်မြေပုံများ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးလိုပါသလား
Juan Miguel Cassissa အားစာပြန်ပါ
ငါ့မှာ tom tom တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ အမှန်တရားကငါမြေပုံတွေယူလာတဲ့ကဒ်ပျောက်သွားတယ်၊ ဒါကသာမန် SD ကဒ်ဖြစ်ပြီးငါမြေပုံပါတဲ့နောက်တစ်ခုထားချင်တယ်၊ နည်းလမ်းရှိတယ်လို့ထင်သလား။ သူတို့ကို scratch မှ install လုပ်ရန်အမြဲတမ်း upgrade လုပ်ရန်မလိုသော်လည်း scratch မှ installation ကိုမပြုလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်မှာအမေရိကန်မြေပုံပါတဲ့ TomTom One ရှိတယ်။ ဥရုဂွေးမြေပုံပေါ်မှာငါဘယ်လိုထားချင်လဲ။
ana torres ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် VIA 1400 tomtom ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မသုံးစွဲနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလားမှဖြစ်သည်။ ငါတို့မြေပုံနှင့်မကိုက်ညီဘူးလား။
ana torres အားစာပို့ပါ
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က tomtom တတိယမျိုးဆက်ကို ၅၁၂ mb ပေးပြီး fat3 နဲ့ format ချလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့ကို tomtom ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တဲ့ update အားလုံးကို install လုပ်လိုက်ရင်သူက program ကိုဘာမှ install မလုပ်တော့ဘူး။ သူကကျွန်တော့်ကိုမြေပုံမရှိဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါ့မှာမိတ္တူကူးထားလို့သိမ်းထားလို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့သူငယ်ချင်းကဖျက်လိုက်တာနဲ့မကြာခင်အဖြေရဖို့စောင့်နေတယ်။
ငါမှာ Tomtom Go 720 ရှိတယ်။ ဝယ်ပြီးကတည်းကငါပုံမှန်အတိုင်းလာတဲ့မြေပုံတွေကိုပဲသုံးခဲ့တယ်၊ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ့မှာရှိတဲ့မြေပုံကလက်ရှိလမ်းများ၊ လမ်းများစသဖြင့်များများမတွေ့ရဘူး။
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအခြေအနေတွင်မည်သည့်မြေပုံသစ်ကိုမဆို ၀ ယ်ရန်မတတ်နိုင်ပါ။ ဒီ tomtom မော်ဒယ်အတွက်အခမဲ့စပိန်အထုပ်တစ်ခုကိုမည်ကဲ့သို့စတင် download ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Flavio Perego ဟုသူကပြောသည်
Flavio Perego အားပြန်ပြောပါ
ecuador မြေပုံကိုဘယ်မှာကူးယူနိုင်ပါသလဲ ..
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မြေပုံကိုကူးယူချင်ပါတယ်၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုခွင့်မပြုပါ။
Luis Chamorro ဟုသူကပြောသည်
ငါပနားမားမြေပုံကို download လုပ်ပါ ဒါဟာဒီအလုပ်မလုပ်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည် ငါ့မှာ Tom Tom 600 ရှိတယ်။ ငါအရေးပေါ်အကူအညီလိုတယ်။
Luis Chamorro ကိုပြန်ပြောပါ
ဟိုင်းမင်နို၊ ကျွန်ုပ်ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော်လည်းမြေပုံများကိုဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မပြုပါ၊ ပိုမိုရိုးရှင်းသည့်အရာတစ်ခုခုရှိပါသလား။
XL တွင် Iberia မြေပုံနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ကင်မရာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်မည်နည်း။ tomtom မှာ serial နံပါတ်ထည့်တဲ့အခါငါသဟဇာတမပြောတယ်
Francisco Bolivar ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Francisco နှင့်ကျွန်ုပ်၏ Tom Tom ONE Classic ကိုနောက်ဆုံးပေါ်စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီ၏နောက်ဆုံးမြေပုံနှင့်မွမ်းမံလိုပါသည်၊ ယခုတွင်၎င်းတွင်မြေပုံမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Tom Tom နှင့်ကျွန်ုပ်ရှိခဲ့သည့်မြေပုံနှင့်အဆင့်မြှင့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ Tom Tom စနစ်၊ ဘရာဇီးသို့မဟုတ်ချီလီ၏မြေပုံများနှင့်မပါရှိသောကျွန်ုပ်၏ Fluence 2017 ယာဉ်၏ SD ကဒ်နှင့်ဂျီပီအက်စ်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုကဒ်ထဲသို့တင်ချင်ပါသည်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုသူတို့ပို့ပေးပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ Tom tom one-2 ထုတ်ဝေမှုရှိသည်။ ၎င်းကို Iberia map 1020 နှင့်ပြုပြင်လိုသည်၊ ၎င်းတွင် navcore 9510 နှင့် bootloder 5.5136 ရှိပါသလား။ သင့်မှာဒီခေါင်းစဉ်အတွက်မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသောသင်ခန်းစာရှိသည်